Afjarno Android macnaheedu helo mudnaanta ugu sareeya oo u oggolaan doonaa dadka isticmaala si buuxda u kontoroolo qalab. Dad badan oo Android users wali la tacaalaynaa in xididka ay qalab ama aan. In kasta oo ay soo afjarno xaqiiqo ah inaad ka faa'iidaysan karto iyo bixiyaan farabadan ee fursadaha , halka Diinaar kasta waxay leedahay 2 kooxood, weli waxaad u baahan tahay inuu tixgeliyo halista ku keena afjarno.
Afjarno ma u fiican yahay qof kasta, sida halista ka iman karta oo laga yaabo aad uga miisaan faa'iidooyinka iyo aad u badan tahay in qoomameyn lahaa waxa aad ku sameeyey qalab aad, sidaas darteed halkan yihiin sababaha aad waa in aan samayn.
1. Brick Your Device
Waxaa jira fursadaha laga yaabaa in aad ku guul dareysato halka afjarno iyo waxay keeni karaan qalab aad bricked. Inkasta oo ma ahan joogto ah leben, waxaa weli noqon kartaa shaqo adag aad u.
2. Waxaad dhahdaa Nabadgelyo si aad u damaanad
Sida aynu wada ognahay ugu manufactures, aan doonaynin in masuul ka ah dhibaatooyinka keena isbedel hardware iyo software (afjarno waxaa ka mid ah), si afjarno qalab aad gaar ahaan biligleynaya ROM caado u badan tahay tirtiri doonaa damaanad ahaan, iyo qayb ka mid ah ugu daran yahay manufactures garan karin in qalab aad waxaa la rujin ka hor xitaa aad dib goobaha warshad.
3. Phone Security waa khatar
Waxaad kasbadeen mudnaanta ugu badan ka dib soo afjarno, laakiin waqti isku mid ah, si xun u maaraynta helaan xididka sidoo kale noqon kartaa arrin ammaanka weyn, sababtoo ah waxa ay albaabka u furi doonto in ay helaan rabin, dillaac xogta iyo furin xitaa si fudud u jabin karo qalab aad.
4. jawaan ma fududa ee Qofwalba loogu talagalay
Afjarno weli waa nooc ka mid ah shaqada geek, aad u baahan tahay si ay u bartaan wax badan oo soo afjarno shuruudaha la xiriira iyo xamili qalab rooting. Waxaa laga yaabaa inay fud kuwa qibrada leh dadka isticmaala Android oo loo arko waxaa sida fudud sida ku rakibidda app ah. Laakiin sida bilowga ah, waxaa laga yaabaa inaad naftaada u ogaato in qajaar ah.
5. Xeerka Device doonaa aan caadi ahayn haddii aan si fiican loo qabtay
Tani waxay inta badan dhacdaa ee bilowga ah oo aanad aqoon habka rooting ah, waxaa laga yaabaa inaad ka dhigay qaar ka mid qalad inta lagu jiro rooting laakiin ma oga. Waxay keeni lahaa fal qalab aan caadi ahayn oo ay tahay in aad iftiimiyo ROM cusub ayaa weli adag bilowga ah.
6. Nafsadaada ka Updates baahan yahay OEM
Ka dib markii rujin qalab aad, waxaa laga yaabaa inaad ku guuldareysato inay soo dajiyo updates ugu dambeeyey ka OEM ay sabab u tahay software-ka beddelka ka dhacay. Xitaa si guul aad updated, waxaa laga yaabaa in meesha laga saaro rooting iyo aad leedahay si aad u oggolaan in halista iyo mar kale ka rujin qalabka.
Ma ku talo jira inuu aad cabsiiyo oo ku saabsan soo afjarno ama idin bari rooting waa aan waxtar lahayn oo buuxa khatarta, waxaan rajaynayaa in aan idin ogeysiiyo, wax kasta oo wanaagsan oo qiimo iyo aad tahay mid ka mid ah si ay u sameeyaan go'aanka ugu danbeeya. Sidaas fadlan kuwa khatarta rooting ka hor inta aadan qaadan ficil, iyo rabto aad ku raaxaysato nolosha ku faraxsan Android.